I-Israel yokuBamba abahlali abangaCociyo kuzo zonke iiNdawo zoLuntu ezibandakanya iiSinagoge
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » I-Israel Iphula Iindaba » I-Israel yokuBamba abahlali abangaCociyo kuzo zonke iiNdawo zoLuntu ezibandakanya iiSinagoge
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • I-Israel Iphula Iindaba • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Inkulumbuso yakwa-Israeli uNaftali Bennett
Abo bangafuniyo ukugonywa “bayijongela phantsi iinzame zethu sonke,” yazisa iNkulumbuso yase-Israel u-Bennett.
Inani lamatyala amatsha e-coronavirus kwa-Israyeli ayaqhubeka nokukhula.
Ama-Israel angagonywanga awayi kuvunyelwa nakweyiphi na indawo enabantu abangaphezulu kwe-100, ngaphakathi nangaphandle.
Inzululwazi icacile: izitofu ziyasebenza, ziyasebenza, zikhuselekile.
Inkulumbuso yase-Israel esandula ukunyulwa uNaftali Bennett ubhengeze namhlanje ukuba bonke abahlali abangagcinwanga Sirayeli kungekudala izakuvalwa nakweyiphi na indawo yangaphakathi okanye yangaphandle yoluntu ephethe i-100 okanye abantu abangaphezulu. Oku kuvalwa kuya kubandakanya izindlu zesikhungu.
Abantu abangavumiyo isitofu sokugonya se-COVID-19 "basingela phantsi iinzame zethu sonke," utshilo uBennett namhlanje, njengoko inani lamatyala amatsha e-coronavirus kweli lizwe eqhubeka nokunyuka.
Ukuba wonke umntu ufumana ugonyo, ubomi bunokubuyela esiqhelweni, kodwa ukuba isigidi sabantu bayala ezinye izigidi ezisibhozo kuyakufuneka banyamezele ukutshixeka, INkulumbuso yongeze.
"Kukho ixesha apho le ngxoxo kufuneka imiswe," utshilo uBennett kwisizwe. Inzululwazi icacile: izitofu ziyasebenza, ziyasebenza, zikhuselekile. ”
Ukuqala nge-8 ka-Agasti, uBennett wabhengeza, nabani na ongavumiyo ukugonywa akasayi kuvunyelwa nakweyiphi na indawo "engaphezulu kwe-100 yabantu, ngaphakathi nangaphandle" -kubandakanya iithiyetha, imicimbi yezemidlalo, kunye nezindlu zonqulo. Ukungena, abantu kuya kufuneka babonise ubungqina bokugonywa, ubungqina bokuba babene-COVID-19 kwaye bachacha, okanye uvavanyo olubi, olufunyenwe ngeendleko zabo.
I-Israel ibisebenzisa iyeza lokugonya le-Pfizer-BioNTech mRNA coronavirus. Ngokwe-Ofisi yoMphathiswa Wezempilo, ukusebenza kokugonya ngokuchasene nokugula okungumqondiso bekumi kuma-64% kunye nokugula okungathethekiyo kuma-93%.
Oktobha 21, 2021 kwi-01: 30
umfanekiso weskrini شات عراقيات umfanekiso weskrini شات عراقي دردشة عراقية
UNksk Jane Godfrey uthi:
Agasti 16, 2021 kwi-02: 22
Oku akulunganga kakhulu kwaye ayichanekanga ngokokude inzululwazi ihambe iyinto embi kwaye iyingozi kakhulu kwilizwe lethu. Ukuba lo Mongameli mtsha wase-Israeli ebefunda ngenzululwazi ngokwenyani kwezi zitofu zecovid, uya kufumanisa ukuba isizathu sokunyuka kwamatyala e-covid ngaphakathi kwa-Israyeli kungenxa yezi zitofu zecovid ngokwazo hayi ngenxa yabo bangavumiyo ukutofelwa ngokwabo kunye neziyobisi zovavanyo ezingakhange zisilele kukhuseleko lwazo, njengoko zonke izilwanyana ezisetyenzisiweyo kwiindlela zokugonya zafa, Zonke.